Masar ayaa cabasho u gudbisay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ka dhan ah Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masar ayaa cabasho u gudbisay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ...
Masar ayaa cabasho u gudbisay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ka dhan ah Itoobiya
Masar waxay warqad cabasho ah u gudbisay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay si ay uga mudaaharaato qorshaha Itoobiya ee ah in la buuxiyo mashruuca biyo-xireenka ee muranka dhaliya ee loo yaqaan Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD).
Itoobiya ayaa lagu wadaa inay biloowdo buuxinta kaydka GERD bilaha Juunyo iyo Luulyo iyadoo sare u qaadaysa walaacyada ka imanaya Masar.
Istaraatiijiyada biyo-dhaaminta ee biyo-xireenku waxay muddo dheer ahayd arrinta ugu muranka badan ee aan weli lagu xallin wadahadallada Niil ee u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan.
Sida ay soo warinayso wakaalada wararka maxalliga ah, Ethiopian-Insider, Wasiirka Arimaha Dibadda ee Masar ayaa warqad 15-bog ka kooban oo cabasho ah u gudbiyay Golaha Amniga iyada oo loo marayo Mohammed Endris, danjiraha Masar ee Qaramada Midoobay.
“Buuxinta dhaamka Itoobiya ee GERD ka hor inta aan la gaadhin heshiis kama dambays ah oo lala gaadho waddamada ka hooseeya xeerarka ku saabsan buuxinta iyo hawlgallada biyo-xidheenku waxay la jaan qaadayaan ruuxa iskaashiga ka dhexeeya waddamada iskaashiga wadaagga ah ee wadaaga biyo-xireennada caalamiga ah isla markaana xaddi ahaan ku xad gudbaya waajibaadka sharci ee Itoobiya.” Masar waxay ku sheegtay warqadda cabashada ee ay aragtay wargeysaka The EastAfrican.
Qaahira ayaa ka digtay in tallaabada Itoobiya ay qatar weyn ku keeni karto nabadda iyo amniga gobolka.
Qaranka cidlada ah ee waqooyiga Afrika ayaa sheegay in isku-darka birta ah ee mideysan ay sababi karto waxyeelo weyn dadkeeda oo kaliya ku tiirsan ilaha biyaha ee wabiga Niil.
“Tani [buuxinta biyo-xidheenka) waxay khatar galinaysaa amniga biyaha, sugnaanta cunnada iyo runtii jiritaanka in kabadan 100 milyan oo Masriyiin ah oo gebi ahaanba ku tiirsan kaydka wabiga Niil noloshooda”
“Rajada ah in loo geysan doono dhibaato weyn xuquuqdeeda iyo waxyaalaha danaha ka mid ah ayaa gebi ahaanba aan loo dulqaadan doonin Masar” dukumiintiga cabashada ee Masar ayaa raaciyay.
Dukumintiga ayaa sidoo kale ka digaya in istiraatiijiyad biyo-biyood laguma bilaabi karo Itoobiya iyada oo aan lagala tashan dalalka ka hooseeya.
Masar waxay kaloo intaas raacisay in tallaabada ay qaaday Itoobiya sanadkii 2011 ee ay ku doonaysay mashruuca biyo xireenka balaadhan iyada oo aan la ogeysiin ama aan lagala tashan wadamada la wadaga biyaha taasi oo noqoneysa xadgudub ku ah waajibaadkeeda sharciga caalamiga ah.
Si kastaba ha noqotee, Qaahira ma sheegin sida ay ugu xad gudubtay sharciga caalamiga ah.
Masar waxay sheegtay inay wada hadallo culus la gashey Itoobiya kadib markii aakhirkii dib loo bilaabay dhismaha mashruuca warshada korantada ee bilyanka doollar oo laga dhisayo wabiga Niil ee ku dhow xadka Suudaan.
Wadahadaladaas, Masar waxay u sheegtey Golaha Amniga in “ay qaadatay dabacsanaan aad u weyn, muujisay rajo wanaagsan oo aan xad lahayn oo ay muujisay ballanqaad siyaasadeed oo dhab ah” si ay u gaadho heshiis cadaalad ah oo isu dheellitiran oo safka dheer ka taagan ka faa’iideysiga kheyraadka biyaha Niil. .
Xiisadaha u dhexeeya Itoobiya iyo Masar ayaa cirka isku shareeray ka dib markii Itoobiya ka baxday wareegii ugu dambeeyay ee wada-hadallada ee lagu qabtay Washington bishii Febraayo 26, iyada oo sheegtay in loo baahan yahay wakhti dheeraad ah oo lagula taliyo guriga.
Si kastaba ha noqotee, Qaahira oo keenay Maraykanka iyo Bangiga Adduunka miiska wadahadalka, wuxuu saxiixay dukumiinti qabyo ah, oo muujinaya wadaxaajoodyada la dhammeeyay.
Kadib wada hadaladii Washington oo fashilmay, Addis Ababa iyo Qaahira waxay ka ganacsanayeen eedeymo ku saabsan fashilkii wada hadalada Mareykanka hogaaminayo.
Qaahira waxay markaa ku eedeysay Itoobiya “inay si ula kac ah” u carqaladeyneyso dariiqa wadahadalka waxayna wacad ku martay in ay u adeegsan doonto qaab kasta oo ay ku difaacdo danaha dadkeeda.
Itoobiya dhinaceeda waxay Masar kula xisaabtantay fashilka wadahadalada.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Ethiopia Gedu Andargachew, dabayaaqadii bishii Maarso ayaa yidhi “Masar waxay qaadaysaa masuuliyada buuxda ee carqaladaynta wadahadalada iyo ku lug lahaanshaha dhinacyada dibada wadahadalada.”
Ethiopia waxay ka baxday wadahadalkii waxa ay ku sheegtay inay tahay mudaaharaad ay u jeedineyso Mareykanka iyo Bangiga Aduunka oo kaalintooda ka qaadanaya doorka Qaahira.
Markii hore, saraakiisha gorgortanka ee Itoobiya waxay ka cawdeen in doorkii Mareykanku “dhaaftay doorkii goobjoogaha” waxayna ku eedeeyeen Mareykanka inay cadaadis ku saareen Itoobiya inay saxeexdo heshiiska.
Qeyb ka mid ah dukumintiga ku lifaaqan Golaha Amniga, Masar waxay ku doodeysaa “heshiiskan inuu faa iido u leeyahay dhammaan dhinacyada, wuxuu leeyahay qaacido cadaalad ah isla markaana wuxuu si siman muhiim ugu yahay danaha saddexda waddan” waxayna weydiisatay Itoobiya inay saxeexdo heshiiska.
Mas’uuliyiinta Itoobiya ayaan degdeg loogu heli karin faallooyinka la xiriira cabashadii ugu dambeysay ee Masar ay u gudbisay guddiga fulinta ee UN.
Si kastaba ha noqotee, markii uu lahadlayay Ethiopia-Insider, afhayenka Wasaaradda Arimaha Dibada ee Itoobiya, Amsalu Tiezzazu, wuxuu hoos u dhigay cabashada Qaahira isagoo leh “Tani waa eedayn aan sal lahayn”
Amsalu wuxuu yidhi “Waan ognahay in dacwada la gudbiyay” ayuu yidhi Amsalu oo tilmaamaysa in koorsada Masar ugu dambeysay ay ahayd mid aan caqli gal ahayn.
“Itoobiya waxay u gudbin doontaa jawaabta loo baahan yahay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay,” ayuu raaciyay.
In kasta oo aan xusin in GERD ay tahay mashruuc dadka reer Itoobiya, ayaa sarkaalku si kastaba ha ahaatee carabka ku adkeeyay in cabashada Masar aysan dib u dhigi doonin qorshayaasha Itoobiya ee biyo-xireennada.
Itoobiya ayaa sheegtay in arrinta biyo xireenka wabiga Niil ay tahay arin sedex geesood ah
Shirweyne maanta ka furmaya Magaalada Muqdisho
Guddoomiye Cirro Oo Xukuumada Ugu Baaqay Inay Fuliso Heshiiska Prof. Cali...